Posted by သက်တန့်ချို at 10:00 AM
ကိုဇူး December 17, 2012 at 10:08 AM
Anonymous December 17, 2012 at 10:29 AM
Anonymous December 17, 2012 at 10:32 AM
Happy Birthday par !
Happy Birthday par...Doctor :)
မ..မ December 17, 2012 at 11:46 AM
HAPPY BIRTHDAY!!!!!!!!!!!!!!!!WISH YOU ALL THE BEST.
sabalphyu December 17, 2012 at 12:08 PM
ရေးထားတာလေးအရမ်းကောင်းပါတယ်။ Happy Birthday ပါ။
Wishing all happy returns!
A Sagittarian Blog Reader of Yours
စုစု December 17, 2012 at 12:47 PM
အော် အော်--သူ.ဘဝက ဒီလိုကိုး။ ခပ်ငယ်ငယ်ပဲရှိသေးတာပါကလား။
Witmon December 17, 2012 at 12:49 PM
"Happy Birthday" ပါ ကိုသက်တန်.....
ဘ၀နဲ့ ဆန္ဒ တစ်ထပ်တည်း ကျပါစေလို.ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်..... :) :) :)
Anonymous December 17, 2012 at 12:51 PM
မွေးနေ့မှသည် နှောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်အောင် ပျော်ရွှင်အေးချမ်းမှုတွေနဲ့အတူ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ဘ၀လေးကို လျှောက်လှမ်းနိုင်ပါစေ
Cathy Nicholas December 17, 2012 at 1:18 PM
happy birthday ပါ။ ပျော်စရာမွေးနေ့မှာ အကို့ စာကိုဖတ်တော့ စိတ်ထဲတမျိုးခံစားရတယ်။ စိတ်မကောင်းသလို သနားသလို တမျိုးမျိုးပဲ။ ဒီနေ့ကလည်း သာမန် တနင်္လာပါပဲ။မွေးနေ့ဆိုတဲ့ အသိကြောင့် ဆန်းစစ်စရာတွေရှိတယ်ဆိုတာ အကို ပြောမှ အသိဝင်တော့တယ်။ အငိးလေ အသက်တစ်နှစ်ကြီးသွားပီနော်။
Chilly Khaing December 17, 2012 at 1:45 PM
Chilly Khaing December 17, 2012 at 1:46 PM
Ma Tint December 17, 2012 at 2:51 PM
ဟက်ပီဘတ်ဒေးပါ ကလေးရေး)
ငယ်စဉ်ဘဝထဲက မျှော်လင့်ခဲ့တဲ့ စာရေးဆရာလည်းဖြစ်ပြီ
ဘာလိုသေးလဲ မောင်ရေခဲလို့ မေးရမလိုဖြစ်နေပြီး)
happy birthday par..long life the doctor..
မိုးငွေ့........ December 17, 2012 at 4:19 PM
Happy BD...:) your birth date is the same with me i was born on 17 march.
အဖြူရောင်နတ်သမီး December 17, 2012 at 4:33 PM
Happy Birthday..'Snow Man'
ဆွေလေးမွန် December 17, 2012 at 5:24 PM
မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ. အစ်ကိုသက်တန့် ရေ။
Anonymous December 17, 2012 at 7:00 PM
''Happy Birthday ''
On this special day, I wish you continuous good health, more wealth,love and happiness.
May Khin December 17, 2012 at 7:04 PM
မင်းရဲ့ဘေးမှာတော့ မင်းရဲ့မိတ်ဆွေတွေအများကြီးပဲကွဲ့ ကဲ ကလေးရေခေါင်းမော့ရင်ကော့လို့ လောကကြီးကို ရဲရဲသာကြည့်လိုက်စမ်း ။ ကောင်းကင်ပြင်ကြီးဘယ်လောက်လှလိုက်သလဲ မင်းရဲ့ ဒီတစ်ရက်တာဟာ တခြားနေ့တွေလိုပဲ ဘာမှမထူးခြားဘူး ဒါပေမယ့်မင်းကိုယ်မင်း အသိပေးရမယ် အချိန်တွေ မရှိတော့ဘူး အချိန်တွေပြန်ဝယ်မရတော့ဘူး မင်းကိုယ့်ကိုယ်အားရကျေနပ်မိရဲ့လား ။
“ ဟက်ပီးဘတ်ဒေးပါ မောင်သက်တန်.ရေ
May December 17, 2012 at 7:31 PM
ဘာလို့လဲဆိုတော့ I know this boy is you.
Happy Birthday and wishing you all the best!
ချစ်ကြီး December 17, 2012 at 8:29 PM
Happy Birthday .. Wish you to continuous success.
happy birthday ko thet tant
T.Win December 17, 2012 at 9:19 PM
Happy Birthday par..
Sharing makes Everyone HAPPY.Happy Birthday.
"ထာဝရ ချမ်းမြေ့ ပါစေ...ငြိမ်းအေးသော ဘဝကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပြီး ရေလို အစဉ်အမြဲ အေးမြနေပါစေ..."ရေ" လို လူသားတစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်ပါစေ..လူနာတွေ အပေါ် မေတ္တာ စေတနာထား ကြည့်ရှုပြုစု စောင့်ရှောက်ပြီး ကိုယ်ဝါသနာပါတဲ့ စာပေရေးသားခြင်း ဖြင့် ဘဝမှာ အောင်မြင်နေပါစေ...ချစ်သော မိခင်...ဖခင်...ညီမလေး မိသားစု နှင့် အတူ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စွာ ဘဝမှာ နေထိုင်နိုင်ပါစေ..."
ချစ်စံအိမ် December 18, 2012 at 6:15 AM
ကိုကိုမောင်(ပန်းရနံ့) December 18, 2012 at 7:00 AM
Happy Birthday ပါ ကလေးရေ... အဲလေ.. သက်တန့်ချိုရေ။
ဒီအသက်အရွယ်နဲ့ ဒီလောက် ဖြစ်နေတာ ဂုဏ်ယူစရာပါ။ ဂုဏ်ယူလိုက်စမ်းပါ။
ဒီအသက်အရွယ်တွေ အများအပြား သက်တန့်ချိုလို ဖြစ်နေကြမယ်ဆိုရင် ရွှေနိုင်ငံကြီး
ကယားလေး December 18, 2012 at 7:39 AM
happu birthday to u. Dr
nlay December 18, 2012 at 11:29 AM
Happy birthday and many more to come ....
Anonymous December 18, 2012 at 8:07 PM
Happy Birthday. One year Older One year Better
Anonymous December 20, 2012 at 4:11 PM
ကံကောင်းလိုက်တာ မိဘတ္တာကို အပြည့်အဝရခဲ့ရလို့.. Belated Happy Birthday ko thet tant cho :D
လရိပ်အိမ် December 20, 2012 at 5:33 PM
အကိုရေ ၊ဟုတ်ပါဘူးမှားလို့၊ဆရာဝန် စာရေးဆရာ ကိုသက်တန့်ချို ( တလေးတစားနဲ့မို့ ကိုတပ်ခေါ်ပါသည်)
ဟက်ပီး ဘီလိပ်တပ် ဘက်ဒေးပါလို့။ နောက်ကျသွားတယ်။ ခုမှရောက်လာလို့ခုမှမြင်တယ်။
လောက ကောင်းကျိုးများကို ဆောင်ရွက်ရင်း
Anonymous December 24, 2012 at 1:53 PM